Google maka azụmahịa | Martech Zone
Tọzdee, Machị 8, 2012 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Ekele diri enyi anyi na onye ndu mgbasa ozi mgbasa ozi, Chris Brogan, na ihe omuma a siri ike ihe kpatara na otu azụmaahịa ga-eji Google+ iji kwalite ahịa ha n'ịntanetị. Igodo maka ndị ahịa anyị abụrụla njikọ miri emi. Echere m na ọ gaara adị mma ma ọ bụrụ na infographic ahụ kwukwara okwu na Onye edemede uru! Ọ bụ ebe a ka anyị na-ahụ ọtụtụ elele.
Ihe omuma ahu bu oke oru nke nkerita uzo Chris banyere ahia ahia ndi mmadu maka ahia. Ọ bara uru ịgụ ya!
Tags: Chris brogangoogle plusgoogle plus maka azụmahịagoogle +google + maka azụmahịainfographic
Ndị ọzọ karịa ndị na-ege ntị, enwere m mmasị na Google+ karịa FB Pages. Oge ga-agwa gị ma + ọ nwere ike ịsọ mpi na ọnụọgụ ọnụọgụ.